बलिउडमा नातावादको चर्को बहस, सुशान्तले आत्महत्या गर्नुको कारण यस्तो ! - Khabar Break | Khabar Break
बलिउडमा नातावादको चर्को बहस, सुशान्तले आत्महत्या गर्नुको कारण यस्तो !
असार ५ – बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतको आत्महत्या पछि बलिउडमा हुने गरेको नातावाद र सिण्डिकेटको बिषयलाई लिएर चर्को बहस शुरु भएको छ।
मुम्बईमा ठूलो सिन्डिकेट चलिरहेको छ। त्यहाँ नातावाद हावी छ। सुशान्तलाई बहिष्कार गर्ने वा फिल्मबाट निकाल्ने निर्माताहरूविरुद्ध आत्महत्याका लागि उक्साएको लगायतका आरोप लगाउन थालिएको छ। सुशान्तले आत्महत्या गर्नु यसैको उपजको रुपमा धेरैले ब्याख्या गर्न थालेका छन्।
पछिल्लो समय केही कलाकर्मीहरुले नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा भइरहेको विभेद, गुठबन्दी , परिवारवाद तथा नाताबाद (नेपोटिजमको) बिषयमा खुलेर आवाज उठाउन थालेका छन्। अभिनेत्री बर्षा सिबाकोटीले त आफू समेत यसबाट पीडित भएको खुलासा गरेकी छन्। पक्कै पनि नातावाद, कृपावाद, बहिस्कारण, सिण्डिकेट, अपमान, भेदभाव जस्ता कुराले मानिसको मनमा पक्कै चोट पुर्याउँछ।
आत्महत्याको कारण खोज्ने हो भने यसको प्रमुख कारण मानसिक रोगलाई लिने गरिन्छ । त्यसमा पनि डिप्रेसन एक नम्बरमा पर्ने गर्छ। विभिन्न कारणले गर्दा मानसिक समस्यमा परेपछि बेलैमा सहि उपचार हुन नसक्दा आत्महत्या जस्तो दुखद घटना घटन सक्छ।
तर आत्महत्याको पछाडिको कारणलाई बेवास्ता गर्दै फरक व्याख्याले समाजमा आत्महत्या प्रतिको बुझाई र धारण गलत बन्न जान्छ। फिल्म नपाउँदैमा, ऋण लाग्दैमा, प्रेममा असफल हुँदैमा वा अन्य एउटै मात्र कारणले कसैले आत्महत्या गर्दैन। यसका पछाडि धेरै कारक तत्वले प्रभाव पारेको हुन्छ। आत्महत्याको हिसावले केही व्यक्ति बढी जोखिममा परेका हुन्छन्। उनीहरुले आत्महत्या गर्ने संभावना धेरै हुन्छ।
पेशाको हिसावले पनि व्यक्तिहरुमा आत्महत्याको जोखिम बढी हुन्छ। तनावपूर्ण पेशा अंगाल्ने व्यक्ति अरु पेसामा भन्दा आत्महत्याको जोखिम बढी हुन्छ।
फिल्म वा कलाकारिता पेशा पनि तनावपूर्ण पेशा हो। यो पेशामा स्थापित हुन धेरै संघर्ष गर्नुपर्छ।
बलिउड अभिनेताको आत्महत्याको कुरा गर्दा उनी बिगत ६ महिना देखि डिप्रेसनमा थिए भन्ने कुरा बाहिर आएको छ। तर पारिवारले यो हत्या हुनसक्ने आशंका गरिरहेका छन्। यद्यपि उनको मुत्यु झुण्डिएर भएको देखिएको छ।
उनी के कारणले गर्दा डिप्रेसनमा थिए भन्ने कुरा फरक हो। डिप्रेसन हुनुमा धेरै कारण हुन सक्छन्। व्यक्तिको व्यक्तित्व, स्वभाव, जीवनशैली, रहन सहन आदि कुराले पनि मानसिक रोग तथा आत्महत्याको जोखिम बढाउँछ।
सुशान्तलाई आत्महत्या गर्ने बाध्य बनाइएको हो भन्दै सलमान खानसहित ८ जना बिरुद्ध दुरुत्सानको मुद्दा समेत दायर गरिएको छ। अदालतले यसलाई कसरी लिन्छ हेर्न बाँकी छ। कसैलाई आत्महत्या गर्न बाध्य बनाउनु एक किसिमले अपराध नै हो।
यसको साक्षीमा अभिनेत्री कंगना रनावत बसेकी छन्। कंगनाले भनेकी छन्, ‘इन्जिनियरिङमा राम्रो ¥यांकमा आएर सुशान्तले छात्रवृत्ति पाएका थिए। त्यत्रो संघर्ष गर्दै आएका उनको दिमाग कसरी कमजोर हुन सक्छ र आत्महत्या गर्न सक्छन्रु’
कंगनाको बुझाइमा कमजोर दिमाग भएको मान्छेले मात्र आत्महत्या गर्छ भन्ने देखिन्छ। तर यो बुझाइ गलत हो। डिप्रेसनमा गएपछि व्यक्तिको आफूलाई हेर्ने दृष्टिकोण आत्मवल, निर्णय लिने क्षमता कमजोर भएर जान्छ।
मानसिक स्वास्थ्य समस्याका बारेमा जनचेतनाको ठूलो आवस्यकता देखिन्छ। डिप्रेसन तथा आत्महत्याका विषयमा सत्य तथ्य जानकारी दिन सके तथा यस बिषयमा बहस र छलफल अगाडि बढाउन सके यस्ता दुखद घटनाहरुलाई कम गर्न सकिन्छ।